Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain naseGolden Visa
Sinikeza Izinsizakalo Zokufuduka Komnotho eSpain nge:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eSpain
● I-visa yegolide eSpain
● Iphasiphothi yesibili evela eSpain
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eSpain kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha eSpain basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eSpain kunikezela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eSpain, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eSpain, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshala imali eSpain, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali eSpain, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali eSpain, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali eSpain, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eSpain, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eSpain, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eSpain, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eSpain, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eSpain, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eSpain, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eSpain, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali eSpain, ukuhlala nokuba yisakhamuzi ngokutshalwa kwezimali eSpain, izinhlelo zezomnotho eSpain, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eSpain, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eSpain, okwesibili ipasipoti eSpain, izinhlelo zepasipoti zesibili eSpain, ipasipoti yesibili ngiseSpain, ipasipoti yesibili eSpain, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili eSpain, ipasipoti yesibili yezombusazwe eSpain, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwezimali eSpain, ipasipoti yesibili yobuzwe eSpain, uhlelo lwesibili lwamaphasipothi eSpain, izinhlelo zepasipoti yesibili eSpain, i-visa yegolide eSpain, ama-visa egolide eSpain, izinhlelo ze-visa zegolide eSpain, uhlelo lwe-visa yegolide eSpain, i-visa yesibili yegolide eSpain, uhlelo lwesibili lwe-visa eSpain, ama-visa egolide amabili eSpain, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eSpain, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eSpain, izakhamuzi ze-visa zegolide eSpain, uhlelo lwe-visa legolide eSpain, izikimu ze-visa zegolide eSpain.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali eSpain ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eSpain Kokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali: EUR 500,000
Isingeniso iSpain and Residency by Investment
Funda kabanzi ngeSpain
ISpain iboniswa njalo njengeNombolo Yokuqala yendlela yokuphila emhlabeni, futhi akunzima ukuthola ukuthi kungani. Azikho izizwe eziningi ezinganikela ngesigcawu esihluke kakhulu, ubunjiniyela obunika amandla, kanye nefa elirekhodiwe elijulile nomkhathi walo omangalisayo nolwandle olujabulisayo.
ISpain ibuye yaziwa njengesizwe esizuzisa kakhulu emhlabeni, njengophenyo lwamazwe ayi-169 yiBloomberg. Ukuhlola kubheke izinto ezimbalwa ezengeza enhlalakahleni ejwayelekile, isibonelo, inzalo, okuguquguqukayo kwemvelo, kanye nokuphathwa kwempilo.
ISpain ngaphezu kwalokho inekusasa eliphakeme kakhulu lapho ingena emhlabeni phakathi kwamazwe e-European Union, ngemuva kweJapan neSwitzerland emhlabeni wonke, njengoba kukhonjisiwe yi-United Nations. Ngo-2040, iSpain yindatshana yokuba nesikhathi eside kakhulu sokuphila emhlabeni, cishe eminyakeni engama-86, silandelwa yiJapan, iSingapore neSwitzerland.
Nazi izizathu eziyishumi eziyinhloko zikaLucas Fox Style zokuthi kungani sithemba isimo seSpain njengendawo yokuphila emhlabeni evikelekile ngesikhathi esibaluleke kakhulu:
1. Isimo Sezulu
Indlela yokuphila yasolwandle esezingeni eliphakeme icacisa ukukholelwa okubanzi ukuthi indawo yase-Iberia inesimo sezulu saseMedithera, kepha empeleni lokhu kuyisiqeshana sendaba efudumele nejabulisayo. ISpain inkulu kakhulu, futhi inendawo yayo yokugxila emikhulu, izindawo ezinamaqhuqhuva amangalisayo, nobude obubucayi bogu olushaya ne-Atlantic, lesi yisizwe esinokungafani okuyisidina - okuyizinto ezinengqondo zokuthola imali empilweni. Impela, lina imvula ethafeni, kepha ngenkathi isimo sezulu singase sikwehlise kwesinye isikhathi umoya ngeke. Kungakhathalekile ukuthi uziphumulele esihlabathini esimhlophe sase-Ibiza, uhamba ngezikezi zasePyrenees, noma ukupopota ngezintambo ezimibalabala unganaki ugu olusenyakatho lweGalician olusenyakatho, izimo zizoba umlingani wakho.
ISpain inezindawo ezingama-8,000km nezindawo ezisogwini lolwandle, kufaka phakathi nengxenye yolwandle oluhle kakhulu emhlabeni. Cabanga ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka acace bha, isihlabathi esimhlophe, ama-bluffs amabi anolaka, amatheku afihliwe, nokuphakama okuhle. Khetha ukuhambahamba, ukuhambela phambili, noma ukuphumula elangeni, ukuzulazula, ukuntweza, noma ukulungiselela umncintiswano.
Ukuqinisekiswa okufinyelela kude kweBlue Flag kugcizelela isimo seSpain emgqeni ongaphambili wekhwalithi yolwandle kanye nenhlalakahle, ngamabhishi olwandle angama-569 (20% we-aggregate) avunyelwe ngokusemthethweni ukukhombisa le pennant ehloniphekile yobukhulu. Amaphesenti angu-16 olwandle olwandle iBlue Flag aseSpain. Isibophezelo esiqinile sokwenza ugu lolwandle luqoqe imfucumfucu nokusaphaza, futhi kusize ekuqinisekiseni ngalezi zindawo zokuhlala ezivamile zezakhamizi zemvelo.
Ama-diners aseSpain akhonjiswe emarondini amathathu amakhulu 'e-World's Best Restaurants' selokhu aqala ngo-2012. I-rundown yenze amagama aziwayo emhlabeni wonke ka-Ferran Adriá no-El Bullí (awine amahlandla amaningi) ne-The Roca Brothers ne-El Celler Can URoca (uwine kabili).
4. Ubungcweti Nokusungula
ISpain ingaphezulu kakhulu kokulwa nezinkunzi ne-flamenco, naphezu kweqiniso lokuthi le mihlangano ilukelwe ngokwamava esizwe. Ngokunjalo inikeze nezwe, ochwepheshe nababhali, futhi iyaqhubeka nokwenza kanjalo. IGoya, iVelásquez, iPicasso, iMiró, iDali, iCervantes neGaudí… uhlu lwenhlanhla olukhulu lungathokozelwa ezindaweni zomlando, emigwaqweni, nasezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini eziningi nasemibonisweni lapho isiko laseSpain linconywa khona.
ISpain ithanda ukujabula kusukela esikhathini esedlule kepha ngokungeziwe ibamba inqubekela phambili engaguquguquki futhi isebenzisa umcabango wayo onamathele ngokujulile ukwakha ingxenye enkulu esigabeni senhlalo emhlabeni kulokho okuzayo. Noma iyiphi indawo oya eSpain lokhu kuyenzeka, kusuka kumaCastellers akha izingqinamba ezinselele ngamandla adonsela phansi ezindaweni ezihlangana ngaphandle ezisebenza emapaki noma kumabhasi azama ukunaka ezimpambanweni zedolobha. Ezweni nasesizweni sonke, ukwenziwa kwamasiko, kanye namasiko kuyaphatha, futhi kuyingxenye eqinisa indlela yokuphila.
5. Uhlaka kanye Nokuxhumana
Isithangami Sezomnotho Emhlabeni sibeke iSpain kunombolo 12 emhlabeni kanye 'nesibonelo esihle' ekuphathweni kwesisekelo kanye namasu. Inenye yezindlela ezinkulu zokuxhumana ezitaladini ezinama-17,000km emigwaqo yokupaka, inethiwekhi yesitimela esheshayo ende kunazo zonke eYurophu okwamanje ehlangana neBarcelona neParis, futhi kuhlangana umoya omangalisayo nolwandle.
Ngakho-ke ukuzungeza kulula, futhi iSpain inika abantu izizathu eziningi zokuhamba nokuphenya. Ukwengeza futhi ukudala isisekelo sekusasa elinamandla. Intuthuko emabhizinisini athuthukile ayijwayelekile, kanti ukufakwa ngokuphelele kwe-broadband kuthinta imindeni ngisho neziphathimandla zomphakathi kanye nokuphathwa kwenhlalakahle kubamba izigaba ze-e.
Imiyalelo iyamangalisa - kunezikole ezingama-226 ezibhalisiwe emhlabeni wonke - ukunakekelwa kwezokwelapha kuyahlonishwa kulo lonke elaseYurophu nokwedlule, amapaki ayabhekelwa, imigwaqo iyahlanzwa futhi kudoti nokusetshenziswa kabusha kuphathwa ngokungenaphutha nangempumelelo.
6. Amasiko Nemikhosi
Imikhosi ingumsebenzi wobuciko eSpain. Kungenxa yazo zonke izinhloso ezingacabangi ukuthi kudlule izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle komkhosi wonke umuntu angawazisa. Njengesizwe samaKatolika, iSpain inemikhosi eminingi eqinile nemashi. Ama-Goliaths, ahlanganisiwe, amatafula amade emigwaqweni evaliwe nokuvuselelwa kabusha kwemigqomo kubalulekile empilweni edolobheni ngalinye, edolobheni nasedolobheni.
Umgubho kaPamplona weSan Fermin, 'ukugijima kwezinkunzi' okudumile, kanye nabesilisa abangama-40,000 abakhulukazi abanesiphithiphithi somkhiqizo wemvelo osuselwa e-La Tomatina eValencia bangathola izici zomhlaba wonke kodwa imihlangano ecebile nokudunyiswa kosuku lokuya emsebenzini, umdanso noma i-firecracker - phila ngokungaqondakali nangokwangempela eSpain 'yangempela'.
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi amazwe amaningi eqinisekisa ukuba nemiphakathi yama-bistro, kepha okwahlukahluka kokudla okuphansi akungeke kubambe i-cappucino embukisweni ocacile ongapheli weSpain wesisekelo esizimele, esinomlingiswa, esimemayo, nesivame ukubheda.
Lezi zindawo azinawo amandla okubhekana nama-baristas nobhontshisi ogcwele ngokweqile. Kuyizinsika zenethiwekhi, isiqeshana esiyisisekelo sempilo lapho umphathi wezezimali angathatha khona i-cortado esheshayo eseduze ngabasebenzi abafaka amasemishi kusuka kucwecwe lwesiliva nokwazisa uphuzo lwasekuseni olufanelwe kahle. Futhi, lapho i-gin ne-tonic noma ingilazi yewayini ithathwa kuvulandi noma ezihlalweni ezingagxilile ezibekwe kuma-asphalts.
Indlela yangaphandle yokuphila ihlakulele ompetha abaningi abanikela ngeSpain. Abantu, isibonelo, uSeve Ballesteros, uRafa Nadal, uGarbiñe Muguruza, uMiguel Indurain, noFernando Alonso bahlala eduze kwamakilabhu, isibonelo, iBarcelona neReal Madrid ababusa ezingeni lomhlaba.
Kusukela kuma-Olimpiki adumile wango-1992, inani labancintisana labesifazane abenza ubizo emdlalweni lenyuke lisuka ku-300,000 laya ku-700,000. Kodwa-ke, noma ngubani angasebenzisa indlela yokuphila yaseSpain.
Ukusuka ekuhambeni izintaba nokuhamba uye ekubhukudeni nasentshonalanga, kusuka ebholeni nakwebhola kuya kuthenisi kanye nebhola lesandla, nokusuka ekugijimeni kwangemva komsebenzi noma ukuzungeza okuntekenteke kwePadel ekilabhini kuya ekuzulazuleni ngasolwandle olwandle ufuna ikhefi, isenzo sangempela sihlukile Kunzima ukuvika.
Umlando omubi we-promoter yase-Iberia ushiye izibazi zawo kepha futhi unikeze amaparele enhlalo aguqula isizwe sibe mahhala, ngaphandle kwehholo lombukiso elilungiselelwe ukunxephezela abathakazelwayo ngokwakha izigigaba ezibalulekile ngemithelela yamaRoma, ama-Arabhu, amaGothic kanye namaNamuhla.
Amandla ngobunjiniyela ayisisekelo sendlela yokuphila yaseSpain, engabangeli ukungaqiniseki ngezindawo eziningi ze-UNESCO Heritage Heritage - iSagrada Familia yaseBarcelona, ​​i-Alhambra yaseGranada, i-Old City yaseSalamanca, neLa Mesquita eCórdoba - inhlanganisela ye-florid, i-gothic, ukuvuselelwa kabusha kanye Moorish Mudéjar, njengoba nje isonto kanye mosque kwelinye.
Umuzwa omuhle wenethiwekhi uhlupha umphakathi waseSpain. Abantu bahlela ukukhuluma, baphikise, futhi bagubhe. Ubudala buthathwa futhi bujatshulelwa futhi umndeni uyikho konke - noma ngabe uyisandiso sakamuva kakhulu noma usungulwe kakhulu uzoba ucezu lwezinto, ungalokothi ube endaweni yokudlela ngeSonto emini.
Ngokuzuzisa, ukuhlolwa, ukuhlanganyela, okomhlaba wonke, okwenziwe ngokwesiko, nokuqhekeka komhlaba ngokulingana, inani labantu baseSpain liyinhlanganisela ehehayo yezinhlamvu kanye nokuziphatha komphakathi okuncike emlandweni omude, onodlame oqhubeke kuze kube ngokulingene njengasekupheleni kwesikhathi.
Kodwa-ke, lokhu kubonakala nje kuqinisa isiqinisekiso sokuthuthela kwi-21st Century njengephayona ezintweni ezingapheli zezinto zokuphila ezizuzisayo. Abantu baseSpain bayajabula futhi banobuntu obuqinile, kepha ngenhlanhla, bangakumema futhi, okusho ukuthi abaxoshiwe bangabamba iqhaza futhi basebenzise indlela yabo yokuphila ngendlela ekahle.
10. ISpain Ngokwaso
Sonke sinemicabango eyahlukahlukene maqondana nalokho okusungula indlela enhle yokuphila, kepha ukuheha kweSpain kulele kunqwaba yamakhredithi ajwayelekile akhiqizwe emhlabeni ngaphezu kwenani elikhulu leminyaka
Noma yini oyifunayo, iSpain inamazwe avulekile, iziqhingi, namachibi adlulisa indawo ekahle yokunikeza impilo yakho enhle kakhulu. Inemiphakathi yasemadolobheni ephilayo, amadolobha okudoba athambile, amadolobha ezimakethe, kanye nama-idylls avulekile anikeza ukuzwana nokuthula ukusuka kunoma iyiphi indawo.
Amachibi, izintaba nezigodi kuhlala kunokwehluka okukhazimulayo okujwayelekile kuma-supasachach marinas akhulayo nentuthuko entsha
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngo-Investment yaseSpain
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain
Imvume yokuhlala ekhishwe iminyaka engu-2
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain
I-2 kumaviki angu-4
Ngemuva kweminyaka emihlanu yokuhlala ngokusemthethweni
Ngemuva kweminyaka eyi-10 yokuhlala ngokusemthethweni.
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseSpain
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain
- Izimpahla ezithengiswayo (€ 500,000)
- Amasheya noma imali ebhange (€ 1 million)
- Isikweletu sikahulumeni (€ 2 million)
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali kweSpain
ISpain ingenye yezindawo zamaholide ezidume kakhulu eSouthwestern Europe. Inemvelo enhle, amasiko ahlukahlukene nomlando. ISpain iyilungu eligcwele le-European Union nendawo yaseSchengen. Lokho kusho ukuthi izakhamizi zaseSpain zijabulela ukuhamba okungenamkhawulo kwama-visa kulo lonke elaseYurophu. Uhlelo oludumile lokuhlala kwezotshalo eSpain lushesha kakhulu futhi lulula. Inikeza wena nomndeni wakho zonke izinzuzo ngaphandle kokuhlala ezweni ngokomzimba.
Ukufuduka komndeni eSpain
Oshade naye nezingane ezineminyaka engaphansi kwengu-18 bangathola izimvume zokuhlala ngokuya ngohlelo lokuhlanganisa umndeni, ngemuva kokwamukelwa komtshali zimali omkhulu. Abazali nezingane ezingaphezu kweminyaka engu-18 ubudala nabo bangafaneleka, uma bencike ngokwezezimali kumtshalizimali omkhulu.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eSpain
Inqubo ishesha kakhulu. Kuthatha kuphela izinsuku eziyi-10-15 ukwethula isicelo. Yize kunjalo, ngaphambi kokufakwa kwesicelo ofake isicelo kumele ngabe uzibophezele ekutholeni indawo. Kusho ukuthi umfakisicelo kufanele avakashele eSpain ngaphambi kokufaka isicelo, asayine inkontileka yokuthenga endaweni ebikhethiwe, bese evula i-akhawunti yasebhange.
Lapho ebuyela ekhaya, umfakisicelo udlulisa idiphozi ukuqala inqubo yokuthengisa. Le nqubo ingathatha izinyanga ezimbili kuya kwezintathu, ngemuva kwalokho ofaka isicelo angaletha isicelo futhi athole imvume yokuhlala.
Umthetho waseSpain 14/2013, uvumela abatshalizimali abangewona ama-EU ukuthi bafanelekele ukuhlala eSpain ngaphansi kohlelo lwe-visa yegolide. Ukutshalwa kwemali okulandelayo kufanelekela i-visa yegolide yaseSpanish.
Izidingo zezezimali zeSpain
Ukuze ufanelekele ukuhlala endaweni yokutshala imali kudingeka intengo ephansi yokuthenga impahla engu-EUR 500,000. Kukhetha umtshalizimali ukuthi uhlala endaweni ethengiwe noma uyiqashe. Ngokwengeziwe, kuzokhokhwa imali nezintela nezomthetho zikahulumeni, okuhlanganisa cishe ama-EUR 60,000 emndenini we-4.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali kweSpain
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents aseSpain futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli eSpain inikeza amaklayenti nemindeni yawo eSpain ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eSpain, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eSpain namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eSpain noma i-Golden Visa yaseSpain noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eSpain noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshalwa kwezindlu kuSpain, nokunikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani ISpain noma i-offshore, izinsiza zabantu eSpain nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezenzelwe ukuba yisakhamuzi eSpain kanye nokuhlala okwesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseSpain:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali OkweSpain, ngokungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika OkweSpain, ababaleki abafudukela kwamanye amazwe abangabizi kakhulu eSpain, ukuhlala kabusha okungabizi ngabacwaningi bokutshalwa kwezimali eSpain, ukuhlala kabusha okungabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain kanye nenkampani yababizi bokufika efinyelelekayo eSpain
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka eSpain kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eSpain iya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka eSpain kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili esuka eSpain iye emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa eSpain kuye emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eSpain.
Izinhlelo ze-visa zegolide eSpain ziye emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka eSpain ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela eSpain ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe ezisuka eSpain ziye emazweni angu-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu kwangempela eSpain ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali eSpain, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali eSpain. Sine-tie nabathuthukisi abambalwa bezindawo ezithengisa izindlu eSpain abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eSpain, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezihamba phambili zokuhlala kweSpain ngokutshalwa kwezimali kwempahla eSpain.
Udinga ukwazi - iSpain Residency by Investment
Ukuhlala kabusha ngummeli wezokutshalwa kwezimali eSpain kuzonikeza ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eSpain. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka usuka eSpain noma uye eSpain, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain kumakhasimende ngokuthola imvume yokuhlala eSpain nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala waseSpain, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eSpain sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eSpain. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eSpain kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eSpain isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseSpain.
Isikhathi: I-2 kumaviki angu-4
Lapho isicelo sakho sokuba ngumhlali ngokutshalwa kwezimali eSpain sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi aseSpain:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain azinikelwa kubaHwebi noma abasabalalisi bezikhali nezinhlamvu ezivela noma eziya eSpain.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali zeSpain akunikezwa ukubhekwa kobuchwepheshe eSpain noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya eSpain.
Indawo yokuhlala ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eSpain ahlinzekelwa noma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni noma zobugebengu eSpain.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali eSpain akukhona okwabantu abasebenza ngokusebenza kofuzo eSpain.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain akuyona eyamabhizinisi asebenzelana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eSpain.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukuxhaswa kweSpain akutholakali kubantu baseSpain abasebenza ngokuhweba, ukugcina eSpain, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali eSpain akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo eSpain akuzona ezenkolo namahlelo abo okusiza abantulayo eSpain.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Spain ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zocansi eSpain.
Ukuhlala kwethu abameli eSpain awasekeli ukuhweba ngebhizinisi lokuthengwa kwezidakamizwa eSpain.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukuqaphela okunengqondo ukucacisa imibhalo ye-AML yamakhasimende aseSpain ne-KYC yawo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eSpain ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokuxhaswa kokutshalwa kwezimali eSpain ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eSpain.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zaseSpain, senza izixazululo ezinhle kakhulu
Ukuhlala kwethu ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain kunikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle laseSpain.
Sithathe isipiliyoni seminyaka sokuhlala kabili eSpain sisekela amaklayenti nemindeni yawo eSpain.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali eSpain nabasebenzeli bezomthetho baseSpain abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu nabasebenzeli benqubo yokusingatha iSpain nokusetshenziswa abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eSpain nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba lapho ngebhizinisi noma ukwesekwa komuntu siqu eSpain
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba e-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi iSpain, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eSpain kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eSpain
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali kweSpain sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eSpain, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lweSpain nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa eSpain
Inqubo Yezimvume Zokusebenza eSpain
Indawo yokuhlala okwesikhashana eSpain
Indawo yokuhlala unomphela eSpain
Ukuba yisakhamuzi saseSpain
Ama-Embasi nama-Consulates aseSpain
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka eSpain ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho eSpain ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weSpain, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini eSpain ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eSpain, sinikeza ngezamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR naseSpain, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseSpain abasenza sitolo esisodwa eSpain namazwe ayi-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu, kanye nosomabhizinisi baseSpain ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eSpain ngosizo lwabameli bethu, ababonisi bethu kanye nababoshiwe eSpain nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani eSpain noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eSpain zishibhile ngathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eSpain
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eSpain uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange eSpain ne-akhawunti yasebhange yenkampani eSpain, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha eSpain
Ingabe udinga ukubonisana eSpain, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eSpain njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eSpain noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze ISpain uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elikhona eSpain ukuqala ngokushesha eSpain.
Imisebenzi Yezabasebenzi eSpain
Our inkampani yezabasebenzi eSpain ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala eSpain free.
Izinombolo zefoni ezingokoqobo zaseSpain
Izinhlelo zebhizinisi zeSpain kanye ne izinombolo ezibonakalayo zeSpain Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eSpain
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eSpain nase okuningi.
Ikheli Lehhovisi Elibonakalayo eSpain
Ukusetha ibhizinisi eSpain
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain, isethaphu ibhizinisi ku Spain.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eSpain
Ukwakhiwa Kwewebhu eSpain
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eSpain
Ukuthuthukiswa kwewebhu eSpain
Ukuthuthukiswa kweBlockchain eSpain
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza eSpain
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eSpain
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eSpain
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo ze-Investment zeSpain nokuphumelela kwamakhasimende ethu kubaluleke kakhulu, eSpain, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho eSpain inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseSpain, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende eSpain nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseSpain nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eSpain kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eSpain, lapho imvume yakho yokuhlala eSpain ivunywa.
Amandla wommeli waseSpain ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain. Uma useSpain noma uhlela ukuvakashela eSpain, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani eSpain ukude, amandla akho abameli kufanele abe semthethweni ngokufanele ukuthi asetshenziswe endaweni yaseSpain. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele liphikiswe noma livunyelwe ngokomthetho yihhovisi lenxusa laseSpain.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eSpain
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala yaseSpain ngokutshala imali kwezomnotho waseSpain ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eSpain, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali eSpain kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eSpain, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eSpain, kanye namafemu amahle abonisana nabokufika eSpain.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eSpain | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eSpain | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eSpain | Ukuhlala kabusha ngabameli bokutshala imali eSpain | Ukuhlala kabusha ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali eSpain
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eSpain?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eSpain, kungachazwa njengokuthola ubuzwe baseSpain ngokutshala imali kwezomnotho waseSpain ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, izibopho zikahulumeni, njll eSpain. Faka isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwezimali eSpain, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eSpain olwesekelwa yisakhamuzi ngezinsizakalo zokutshalwa kwezimali eSpain, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eSpain nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali eSpain, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eSpain, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika eSpain.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi eSpain | Ababizi bokufika abafinyelelekayo eSpain | Abammeli bezimali abangena imali eSpain | Abammeli bezimali abangena imali eSpain | Izeluleko ezingabatshali zimali ezifinyelelekayo zaseSpain | Amafemu omthetho wokufuduka ashibhile eSpain
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eSpain?
Iphasiphothi yesibili eSpain, ingachazwa ngokuthi, ukuthola izakhamuzi ezisemthethweni zaseSpain ngokutshala imali kwezomnotho waseSpain ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu, izindlu, amabhizinisi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya eSpain, uhlelo lwesibili lwepasipoti eSpain olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili eSpain, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abaphuma phambili eSpain, abameli bama-passport besibili abahamba phambili eSpain nabeluleki besibili bephasipothi abahamba phambili eSpain, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili eSpain, kanye namafemu amahle kakhulu abonisana nabokufika eSpain.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zaseSpain | Ama-passport wesibili eSpain | Abameli bepasipoti besibili eSpain | Abameli bepasipoti besibili eSpain | Abaluleki besibili bepasipoti eSpain
Iyini incazelo ye-visa yegolide eSpain?
I-visa yegolide eSpain, ingachazwa ngokuthi, ukuthola imvume yokuhlala eSpain ngokutshala imali kwezomnotho waseSpain ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eSpain, uhlelo lwe-visa legolide lweSpain olwesekelwa yi Izinsizakalo ze-visa zegolide zaseSpain, ngokusebenzisa abameli bethu abaphambili be-visa eSpain, abameli abaphambili be-visa baseSpain nabeluleki abahamba phambili be-visa baseSpain, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eSpain, kanye namafemu amahle kakhulu abonisana nabokufika eSpain.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zeSpain | Ama-visa e-Golden agents eSpain | Abameli begolden visa eSpain | Abameli begolide begolide eSpain | Ababonisi be-visa begolide baseSpain
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshalwa kwezimali eSpain?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshalwa kwezimali eSpain yi-EUR 500,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa kwezomthetho kweSpain for Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eSpain kanye nabamele eSpain banikela ukwesekwa kwe-Residency ngokutshala imali eSpain.
Ingabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain kuyabiza?
Izindleko zokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain kanye nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eSpain zenzelwe abantu ababiza kakhulu, sikhokhisa imali yokubonisana kuphela ngokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency ngezixazululo ze-Investment.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain noma nge-visa yabatshalizimali eSpain?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali eSpain kusuka e-Asia, Residency by investing to Spain from Africa, Residency by invest to Spain from Europe, Residency by invest to Spain from South America, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eSpain kusuka eMalaysia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eSpain kusuka eBangladesh, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain kusuka e-Indonesia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain kusuka eSri Lanka, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eSpain kusuka eNepal, Residency ngokutshala imali eSpain kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwezimali eSpain kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali eSpain
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eSpain
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Spain
I-Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte (Spanish)
Ministerio de Corpria, Energía, y Turismo (isiNgisi)
I-Ministerio de Empleo y Seguridad Social (iSpanish)
Ministerio de Economía y Hacienda (ISpanishi, isiNgisi)
I-Ministerio de Hacienda (iSpanishi)
Ministry of Justice (ISpanishi)
Ministry of the Environment (ISpanishi, isiFulentshi, isiNgisi)
Ministry of Development (ISpanishi, enencazelo ye- digital tachograph ngesiNgisi).
I-Ministerio de Sanidad y Consumo (Spanish)
Ministry of the Interior (ISpanishi)
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka WaseSpain , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe eSpain